जाडोमा बाँसको तामा- किन र कसरी खाने ? – दाङ खबर
जाडोमा बाँसको तामा- किन र कसरी खाने ?
मंसिर १८ –बाँसको तामा, हाम्रो रैथाने परिकार । हुन त अहिले यसको सिजतन होइन । यद्यपी जाडो याममा बाँसको तामाको परिवार निकै उपयोगी हुन्छ ।बाँसको तामा मानव स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । यसलाई अचार, तरकारी वा सुपको रुपमा सेवन गर्न सकिन्छ । नेपालमा मात्र नभई दक्षिण यसियामै बाँसको तामाको प्रचलन छ ।
नेपालमा यसको परिकार सिमित भए पनि विदेशमा भने सैयौं परिकारमा यसको प्रयोग गरिन्छ । जाडो मौसममा तामाको सुप निकै लाभदायक हुन्छ । कसरी तयार गर्ने त बाँसको तामा
विदेशीहरुले यसलाई थुप्रै परिकारको प्रयोजनामा प्रयोग गर्छन् । खानाको सुरुवाती समयमा एप्पीटाइजर सलादको रुपमा तामालाई लिने गरिन्छ । तामाको सुप पनि विभिन्न थरीका तयार पारिन्छ । थाइल्यान्डमा तोम यम कोङग, चीनमा हट एन्ड सावरमा तामा अनिवार्य हुन्छ। चीनमा त तामाको २५० भन्दा बढी परिकार तयार हुन्छ ।मासुमा तामा राखेर पकाउँदा पनि निकै स्वादिष्ट हुन्छ । बासको टुसालाई ताजै तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ ।
– यसले ग्यास्टि्रक र अल्सरलाई निको पार्नमा भुमिका निर्वाह गर्छ । नियमित तामाको सेवनले क्यानसरको सम्भावनालाईसमेत कम गर्छ।
Prevदुर्घटना गराएर भाग्ने चालक पक्राउ
Nextअर्घाखाँचीमा आगलागीबाट १ जनाको मृत्यु
जाडोमा गीजरको प्रयोग- यी कुरामा ख्याल राख्नुहोस् है
बम विस्फोटको आरोपमा एक महिला पक्राउ